Ndezvipi zvinokosha pamusoro peMweyakadzi uye unozviita sei?
Chii chinonzi Soulsex?
Soulsex inoshanda sei?
Zvepabonde hazvina kumbovapo kwemazuva mazhinji, uye kana zvikadaro, iye zvino ari kunetsa, tsika uye kusuruvara. Kubvuma kutsvaga basa mushure mekuita hakureve chinhu kune umwe wako, hazvina kunetseka.
Zvinoshamisika, zvisinei, vose vakaroorana vakafanana: vanoshuva zvikuru nokuda kwounyoro, kushushikana uye kugadzikana mupfungwa, hongu, uyewo zvepabonde. Handizvo pamwe nemumwe wako, zvinoratidzika, izvo zvave zvichienda kure.
Soulsex inogona kuva nzira yekudzorera chido chomunhu mumwe chete apo rudo ruchiripo.
Sezvo uri pedyo nemubatsiro sezvakamboita neWessexsex
Zvemitambo uye mafaro asingafungi
Pakuvamba kwehukama kana nehukama, kukanganisa kunoratidzika kuva nguva dzose. Tinozvipa isu kune waunofambidzana uye hapana chaanogona kuita chero chipi zvacho kuti atidzivise kuti tisamuwana iye akaisvonaka.
Semuenzaniso, varwere vakagadzikana vasingachagoni kushandisa uropi hwavo - uye zvichida vane mukana muduku wekutarisa hupenyu hwavo hwepabonde kubva pakufunga - vane maitiro akafanana. Vanotarisira mumisha yevanotarisira vanotaura kuti vazhinji vevagari varo vanoita zvepabonde, pasinei nezwi re autoerotic.
Chido chekuita zvepabonde chiripo, kunyange muhukama huri pamwe chete. Asi kana tsika yacho inotanga, pfungwa inopfuurira pane imwe nguva-uye inoita zvisingabatsiri kudarika pakutanga yaida kutsoropodza. Chimiro chekutsvoda chingave chisinganzwi zvakanaka, asi ndiko kufungisisa kunokonzera kushushikana kwese.
Munhu wose anoyeuka zvakasangana zvepabonde, izvo zvakanga zvisina kungoita zvepanyama chete, asi kushamwaridzana kwepfungwa kune mumwe wako. Kunyanya muhutano huchangobva kutanga umo rudo rwakarurama uye uko kusina tsika, izvi zvekuita zvepabonde zvinowedzera. Ndizvo zvakanyorwa munyori Eva-Maria Zurhorst achida kudzorera mubhuku rake "Soul Sex - Rediscovering Physical Love".
Nokuti chii icho chinoita kuti isu tive vakanaka pamhando iyi yekuita zvepabonde? Ndiyo nzira iyo yose yekubata nayo yakanaka, uyewo kuti tingataure sei zvatisingadi. Vatsva vatsva vari kuzivana uye zvinotofanira kugovana zvavanoda uye zvavasingadi. Icho chiito cheumwe neumwe wekudyidzana kuti awane chimwe chinhu munyaya iyi, kuti aone kuti chii chaanofarira uye kuti rudzi rwekubata ruchamuita zvakanaka uye rini.
Mukati yehukama hwepanguva refu, tinofanira kugara takaziva zvakare apo mumwe wako anoda kungobatwa, rudo uye runoramba rwendo rwusingaperi rwekuwanikwa. Chirongwa hachipo, uyewo mumwe anozviziva - izvo zvinoita kuti Soulsex inakidze, kuwanikwa nguva dzose kutsvaga kwezvinodiwa nezvido zvemudiwa uye kuswedera pedyo, izvo zvinouya nekununura kwavo.
Vakomana vechiduku - tsitsi
Soulsex inotanga nemunhu wese. Inzwa kukwazisa kunonyanya kunakidza zvechokwadi?
Kana zvakadaro, vachachengetwa. Asi kana vachida kukanganisa kukanganisa uye kure, zvakanaka kutaura izvi kune mumwe wako. Haasi mhosva, asi chokwadi ndechokuti kutsvoda kunofanira kunge kwakasiyana. Zvikuru. Zvechokwadi.
Zvichida iwe uchazvisiya uri woga, kana zvisina basa. Uku kufunga kwacho kunoda kuve nekugadziriswa nevakaroorana vakawanda nevanhu, asi vanogona kuzviita pamwe chete. Zvakakoshawo kutaurira mumwe wako uye kuratidza zvaunoda-uye zvakakosha kuti upinde.
Izvi hazvireve kuti zvipfeko zvepanyika kana kuti zvigunun'una zvisinganzwisisiki, rega "zvinhu zvitsva" zvinopisa hupenyu hwepabonde. Zvinongova nezvechido mune zvepabonde. Mumwe shamwari anotaura newe. Mumwe wacho anobatana nerwendo rwekuwanikwa kwekuzadzika kwavo - uye pamwe chete.
Kuchengetedza peji erotic - mukadzi anonamatira pamadziro
Bhuku rinoshandiswa kwemavara Inoratidza mubhati